यस्तो मन्दिर जहाँ मूर्ति बोल्छ, बैज्ञानिक भए चकित ! - Naya Khoz
यस्तो मन्दिर जहाँ मूर्ति बोल्छ, बैज्ञानिक भए चकित !
Posted By: admin | August 22, 2018
यस्तो मन्दिर जहाँ मूर्ति बोल्छ, बैज्ञानिक भए चकित ! मन्दिर त तपाईले धेरै देख्नुभयो होला । आज हामी त्यस्तो मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ जुन तपाईलाई थाहा छैन । संसारमा एक यस्तो मन्दिर छ । जहाँ मूर्ति मानिस झै बोल्छ । पहिला यो कुरामा धेरैलाई पत्यार लागेन । तर, अहिले भने वैज्ञानिकहरुले पनि त्यो मन्दिरमा मूर्ति बोल्छ भन्ने कुरा पत्याए । मन्दिर परिसरमा कोही नभएको बेला शब्द गुन्जने गरेको छ ।त्यो मन्दिर तन्त्र साधनाका लागि प्रसिद्ध बिहारको राजश्वरी त्रिपुर सुन्दरीको मन्दिर हो ।
यो मन्दिरमा सुनसान भएको बेला मूर्तिबाट आवज आउने गरेको बताइएको छ । मध्यराति जब मानिसहरु यहाँ जान्छन् उनीहरुले त्यहाँ आवज सुन्छन् । यो कुरा पुष्टि समेत भइसकेको छ । त्यहाँ मूर्तिहरु एक आपसमा कुरा गरिरहेको सुन्न सकिन्छ ।
यो विषयमा वैज्ञानिकहरुको एक समुहले अनुशन्धान समेत गर्यो । उनीहरुले समेत मन्दिर आसपास सुनसान भएको बेला आवज आउने गरेको निष्कर्ष निकाले । मन्दिरमा केही न कही अनौठो शक्ति रहेको बैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
उनीहरु पनि यो विषयलाई लिएर हैरान बनेका छन् । यो मन्दिरको स्थापना करिब ४ सय बर्ष पहिले भएको थियो । यो मन्दिरमा कलश स्थापनाको नियम छैन । तन्त्र साधना यहाँ पुजा गरिन्छ । तान्त्रिक कारणले यहाँ कलश स्थापना गरिँदैन ।